ပန်ဒိုရာ: နတ်သမီးပုံပြင် သံလွင်အိပ်မက်
မပန်ရေ..ဖတ်ပြီးပြီ အဲလိုအတွေးအခေါ်လေးတွေကို ကြိုက်တယ်၊ သူတို့ ဘဝလေးတွေက တကယ်တော့ သနားစရာ၊ ရင်နာစရာရယ်...။
ဟိုမှာပဲ ကောမန့် ရေးခဲ့ပြီ.. :)
မမရေ ... အဆုံးထိ ဖတ်ခဲ့တယ်နော်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀ထ္ထုတိုလေးပဲ ...။ အော် သူတို့တွေလေးလည်း အသည်းနှလုံး ရှိတဲ့ လူသားတွေပဲလေ။ အိမ်မက်မက်ခွင့်တော့ ရှိရမှာပေ့ါ...။
ဖတ်ပြီး နတ်သားအိပ်မက် မက်သွားပါတယ်..
၀ထ္ထုထဲက ကဗျာဆရာလိုလို လူဆိုတာ ကျနော်တို့ကို
နုနုရည်(အင်းဝ)နမ်းမှာလာမောင် မွှေးတယ်ရှင့် နဲ့သင်းသင်းသာ တတိယဆိပ်ကမ်းကို သတိရမိသွားတယ်ဗျာ
အဲဒီ မိန်းကလေး ရဲ့ inferior complex ကို ပေါ်အောင် ဖွဖွလေး ခြယ်သွားနိုင်တဲ့..အနုပညာမြောက် ဖန်တီးမူ.. ။ တော်ပေ၏။း)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလိုဘဝတွေမှာ ကျင်လည်နေကြရပေမယ့် သူတို့လေးတွေလဲ တချိန်ချိန်မှာတော့ သူတို့ဘဝအတွက် အပြစ်ကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို တောင့်တကြ အလိုရှိကြမှာပဲပေါ့...
လူအများစုရဲ့ နှိမ့်ချခြင်းကို ခံကြရတဲ့ အမှောင်ထဲက ဘဝလေးတွေကို ဂရုဏာဖြစ်ချင်စရာကောင်းအောင် ရေးပြတတ်တဲ့ ပန်ပန်... တော်ပေ၏...။
ဒီဝတ္ထုလေးကို ကြိုက်တယ် ။ တချို့ အခန်းတွေကို ခပ်ရဲရဲရေးထားတာ ၊ စကားပြောခန်းတွေ ကိုလည်းသဘောကျတယ် ။ ရေးထားတာပီတယ် ။ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာရဲ့ ကဗျာအကြောင်း အရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမြင်လေးထည့်ရေးသွားလို့ စာရေးသူအမြင်ကိုသိရတယ် ။
ချစ်သူရည်းစားကြား ၊ ဆက်ဆံရေးက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့တော့ အရင်က စာတွေမှာ ဘလော့ဂါ တယောက်ယောက်ရေးထားတဲ့မှတ်ချက်ကနေ စိတ်ကူးရသလားဆိုပြီးတွေးမိသေးတယ်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်စာ စာလုံးကြီးကြီးတွေမပါတာ ကိုလည်း သတိပြုမိတယ် ။
ဖတ်ပြီး.. ကောင်းပါ၏။ တကယ်ဖတ်ပြီးမှပြောပါသည်။ အတွေး နဲ့ တင်ပြပုံက တမူထူးခြားကောင်းမွန်ပါသည်။
မပန်ဒို တကယ်ပဲ မြန်မာမိန်းကလေး တယောက်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်မှုတွေကို ဖတ်ရပါတယ်.အဲ့ဒီစာပေကို
ဘ၀သရုပ်ဖေါ်လို့ ခေါ်ရင်လည်း ခေါ်ပါစေဗျာ.မော်ဒန်မဖြစ်ရင်လည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့. မြန်မာမလေးတယောက်ရဲ့ ဘ၀ဆိုးလေး ကို စာနာနားလည် သွားကြမယ်ဆို. ကုသိုလ်ရပါတယ်.ခင်ဗျားရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရင်ခုန်သံကို ပုဂ္ဂလိကဆန်ဆန်မခံစားသွားပဲ အားလုံးကို မျှဝေသွားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
The part I like best in your short story is the following.
“နေပါဦး ရှင့်ရဲ့စာတမ်းပြီးတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ”
“ကျွန်တော် ဘွဲ့လွန် တစ်ခုရမှာပေါ့”
“ဟင်.. ဒါဆို ကျွန်မတို့ ဖြေတာတွေက အလကားပေါ့”
“ခင်ဗျားကို အလကား မေးခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ”
“သြော်.. ပိုက်ဆံပေးတာကို ပြောတာလား။ ဟုတ်တယ်။ ဒါပဲ။ ယောင်္ကျားတွေက ဒါပဲလေ။ အင်းပေါ့။ ပိုက်ဆံပေးရင် ဘာမဆို တရားနေတာပဲ”
“ဟာ….” သူ့ မျက်နှာ ရဲကနဲ နီမြန်းသွားတယ်။
“ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို သူများတွေထဲ ဆွဲမထည့်နဲ့လေ။ ဘာမှမဆိုင်ဘူး”
It is sad but true. It's sort ofawakeup call for many people like us.
စ လယ် ဆုံး အကုန်လုံး ညီညွတ်ပြီး ကောင်းလိုက်တာ။
သူတို့ဘက်က အမြင်တွေကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
သာမန်နဲ့မတူတဲ့ ဘဝလေးကို ချပြထားတာမို့ သဘောကျမိတယ်.....
မပန်ရဲ့ ဝတ္တုလေးတွေကို ကြိုက်တယ်...
၂ ခေါက်တိတိ ဖတ်လိုက်တယ်။
ဒီထက်မက ပေးလို့ရရင် ပေးချင်တယ်။
ချီးကျူးပါတယ် ... လေးစားပါတယ် ... အားပေးပါတယ်။
ပူးဝင်ခံစားမှုက အံ့မခန်းပါပဲ…
တကွက်မှ မဟာပဲ အဲဒီမိန်းခလေးကိုယ်တိုင် အနားမှာ လာပြောပြနေသလို ပီပြင်လွန်းလို့ပန်ရေ (မခင်ဦးမေ စကားနဲ့ ပြောရရင်) ဒီနှစ် ဒီပို့ စ်နဲ့အကယ်ဒမီပေးလိုက်ပြီ… လက်ရှိခေတ်အခြေအနေ၊ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ဘ၀တွေ၊ ရွေးချယ်ခွင့်အရှိလွန်တဲ့ဘ၀တွေ၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနောက်ကျကျန်မှုတွေ…. အားလုံး… အားလုံးကို ပါအောင် ခပ်ပါးပါးလေး ထည့်သွားနိုင်လိုက်တာကို လက်ဖျားခါမိပါတယ်…
ဝထ္ထု မဖတ်ပါဘူးဆိုမှ ..အစလေး ဖတ်မိပါတယ် ဆွဲချသွားပြန်ရော..အဲဒါနဲ့ သံလွင်အထိ လိုက်ဖတ်ရတယ်..ရေစီးကသန်တယ်။ လူတွေလည်း ယက်ကန်ယက်ကန်၊ အဖြူရောင်ကောင်လေးရဲ့ မျက်လုံးတွေလိုမျိုး .. အပြင်မှာ ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ။ ကိုယ်တိုင်ရော စာရိတ္တသတ္တိကို ပေပေါ်တင် စမ်းနိုင်ပါ့မလား။ ဘာလို့ ဒီခေတ်က ဒီအဖြေတွေချည်း ထုတ်ပေးနေတာလဲ။
ဒီဝတ္ထုကိုလည်း ကြိုက်တယ်ဗျ။ ဟိုတနေ့က ဖတ်ပြီး ကွန်မင့်မပေးခဲ့ရလို့ ပြန်လာပေးတာ။ အသိပညာပေးရုံမက အနုပညာလည်း မြောက်ပါပေတယ်။
မပန်ရေးပြတော့မှ ကိုကိုယောက်ကျားတွေ တွေးမိကြတော့တယ်...ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကလေးပွားတတ်သွားတာပေါ့ အရေးအသား လုံးဝဂွတ်တယ်ဗျာ... ။
Your blog is extremely amazing ... keep up the good job!